Ngarava muScottish Highlands
Bhuku Rinotungamira Ngarava muScottish Highlands
akanyorwa 14 November 2014 . Posted in Activities
Tweet kubayirira naro
Ngarava muHihllandsKune mahombekombe mazhinji emakwikwi emunharaunda uye maitiro akawanda emakwikwi emakwikwi muScotland uye kune dzimwe nyika dzeUnited States. CTC inhengo imwechete inobatanidza marudzi ese ekushandiswa nekushandiswa.
Mazano ekufambisa mabhiriji mumigwagwa mabhasikoro Tsvaga Highway Code - usasvetuka magetsi matsvuku uye usatenderera mberi pakurongwa kunze kwekunge iine nzira yakatarwa yepakati; Mumamiriro okunze akanyoroka kuona nguva yako sezvo nzvimbo dzinogona kunge dzakanyarara uye zvichakutora iwe kwenguva refu kuti urege; Famba zvakanaka, zvakasununguka uye zvakajeka kubva pamusana; Funga kupfeka ngowani; Chengetedza bhasikoro rako nenzira yakakodzera.
Ita kuti chokwadi vatyairi vanogona kukuona iwe Famba munzvimbo iyo iwe unogona kuona uye kuonekwa; Shandisa magetsi uye funga kupfekedza zvipfeko zvinopenya kana zvinoratidza, kunyanya mumataundi, usiku uye mumamiriro ekunze akaipa; Ita ziso kune vamwe vashandisi vemugwagwa, kunyanya pamasangano, ipapo unoziva kuti vakakuona; Chiratidzo pachena nguva dzose; Shandisa bhero yako - kwete vese vanofamba-famba vanogona kukuona iwe uchiziva motokari. Kurwisana kunowanzoitika apo mutyairi ari mukati memotokari iri kuruboshwe. Usafungidzira kuti motokari iri kuenda mberi zvakakwana nokuti haisi kuisa chiratidzo. Gara uchidzivisa 'kuita' chero ipi zvayo motokari mumamiriro ezvinhu aya - zviri nani kutengesa zvakare kusvikira motokari yaenda. Mazano kuvanairi vemotokari Kuita migwagwa yakachengeteka sezvavanogona kuva, vanodhudhudhu vanoda kuziva vanofambisa mabhasikoro zvakare: Kana iwe uchienda kuruboshwe kurindira mabhasikiti anouya kumusoro kwako uye usavachera; Ipa vafambisi vechibharo mubato wakawanda pavanopfuura;
Pausiku, svetedza maziso ako paunenge uchienda kune vanofambisa mabhasikoro; Mumamiriro okunze anonaya, bvumira mabhasikoro kuti vawane imwe nzvimbo sezvo zvisikwa zvingave zvishoma. Yeuka, vanofambisa mabhasikoro nemotokari vane kodzero yekufananidzira nekugovana nzvimbo imwechete yemugwagwa. Kuremekedza vashandi vose vemugwagwa kunobatsira munhu wese kubatsirwa nekufamba nemugwagwa. Kuti uwane rumwe ruzivo enda kune - https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code CHINHU CHAKANAKA KUTANGA
Callander inogara kumucheto kwekumabvazuva kweLoch Lomond uye Trossachs National Park uye yakanaka kutanga kweScotland's Lochs & Glens Tsvaga nzvimbo inonakidza yezvitsuwa zveScotland kumadokero kuWest Highland Way. Kushongedza makomo, runyararo runyararo uye ruchiyerera nzizi unobatanidza kukupa iwe unoshamisa uye unogara uchishandura nyika sezvaunofamba 96 makiromita kubva kuMilngavie (Glasgow) kuenda kuFort William, achipa Bhedhi nehokufambisa munzira, achiwana runyararo runyararo, ruvara rwepepuru ruchengetwa makomo , masvingo makuru ane bhiza bhiza rinoshamisa kubva kuFil William kusvika kuInverness, vachifamba mune dzimwe nzvimbo dzinopisa zvikuru masikati uye kutarisa kunzvimbo dzakakwirira dzekuchamhembe muBheji nechingwa zvekudya zvakawanda usiku, Kupfuura Rannoch Moor, Kinlochleven kuburikidza ne "Devil's Staircase, Ben Nevis uye Fort William, Scotland yeSouth Outdoor Capital iri pamusoro weLoch Linnhe.
Shandura nharaunda ye lochs uye glen inoumba Loch Lomond & Trossachs National Park uye Highland Perthshire. Ongorora Scotland apo iwe unofamba uchienda kuCairngorms National Park. Charming highland misha, masvingo ezvakaitika kare, Speyside malt whiskeys, maJaiteite mauto, Kuti uwane nguva inofadza uye inonakidza inononoka kutora mumaonero emaruwa akapoteredza Loch Ness, kutora bhasikoro.
Nzvimbo yeLoch Ness inopa nzvimbo dzakasiyana-siyana kubva pamadziro ezvinyoro zveCaledonian Canal kunetsa, kure, kure nemigwagwa yakadai seGreat Way. Nzira dzakanyarara mumigwagwa yeStrathnairn nechekumaodzanyemba kwechech dzakakosha kune mabhasikoro uye kune zvakawanda zvezvikomo zvakanaka zvebhazi. Strathglass nzvimbo inopa ruzivo rwemabhagi egomo kuti ripikisane chero kupi zvako munyika. Nzira iyo inotarisa mukati meBlueuly naLoch Ness, ichipa migwagwa yakawanda iri mumugwagwa, zvichiguma kune zvitatu zvinoshamisa Glens of Affric, Cannich naStrathfarrer. Nzvimbo dziri pasi dzeGlen Cannich dzinokura zvikuru pamusoro peCannich musha, uye gomo duku, asi rakanaka rinokwira rinobvumira kusvika kumasango emasango, ayo anosangana nevamwe vanenge vakatasva mumugwagwa wa Mullardoch, achakutora kuenda kuLoch Mullardoch, 9 makiromita kure.
Ichi chinhu chinoshamisa, chakakombwa nemakomo marefu. Iyo inokwira kuburikidza neGlen Cannich inonyanya kureba asi mumugwagwa unenge wakanyarara uye kudzoka, yose pasi! Glen Affric, inogona kuswedera pedyo nenzvimbo yose yemasango kubva kuCannn and Tomich, inomira pamahombekombe eLoch Beinn a 'Mheadhoin, kutenderera kwemashiripiti. Nzvimbo dziri pasi dzakadzika kumaodzanyemba kweTomich neCannich, kuCorrimony kana kunyange kune Glenmoriston, dziri kure kure nezvose, Iyo inofanirwa nerenje inofamba Inzira iri kubva ku Dog Dog kusvika Knockfin inonakidza, sezvaunotungamira kuna Tomich, kana kuti kubva kuLoch Affric kusvika kuTomich nenzira yeWest Guisachan estate, Cougie uye Plodda Falls. Zvichiwedzera kubva ipapo, unogona kuramba uchienda kune nechezasi kwemaodzanyemba kumaodzanyemba kweTomich neCannich, kuCorrimony kana kunyange kune Glenmoriston, Nzvimbo yakakodzera yekugara Bhedha neRefrefasts ndiyo nyika yeSamba Inopinda mumigwagwa yekupaka uye yekuchengetedza mhepo, makiromita matanhatu kusvika kutanga kwe strathglass nezvimwe zvinoshamisa zvinowanikwa munzvimbo ino, zvakanaka uye kuzadza manheru manheru emunharaunda yeaa, uye doro uye chikafu kuti apedze manheru manheru asati avata, Mambakwedza yakanaka yakawanda yepamusoro-soro mangwanani ekuchengetedza iwe kuenda zuva rose The Steading Highland Glen Lodge
Tsvaga makomo, mapoka uye magungwa anoshamisa eIsle ye Skye apo iwe unofambisa urefu nekukwirira kwezviwi zvinonakidza zvakazara nemhuka dzesango uye zvitsuwa zvechivako zvinogara zvakanyarara, nzvimbo dzisingabatsiri apo unogona kufara kushandisa imwe nguva chaiyo yakanaka. Gungwa rakasvibira reIslay rakanakisa Arran, Islay neJura zvive nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti dzienderere mberi, uye dzinopa chinangwa chitsva chechivako chinoputika. Migwagwa yakapoteredza zvitsuwa izvi hazviiti kuti zvive zvakanakisa, zvisingambokanganwi ruzivo. Chitsuwa chekucheka chiri pakunakisisa nemahombekombe akanaka uye mazambuko anokuendesa kunzvimbo itsva, kupa Bhedha nekumwa kwemafuro emunhu anenge aneta anopedza usiku.
Iyi ihove yevhiskey kurota yakazadziswa, ine masereji masere epachiwi uye vazhinji vakagamuchirwa zvikuru nekutarisa neBhed and breakfast nechekare! Misha iri pazvitsuwa izvi zvose zvinosvibiswa zvakachena uye whiskeys ari gorgeously peaty kunwisa zvikuru mushure mekufamba kwemazuva mashoma mabhasikoro, Kufamba kwakananga kuchamhembe kweScotland kunoreva kuwana kugungwa kunoshamisa.
Kushanda-shanduka kunopoteredza Dunnet Head kunokutora kune dzimwe nzvimbo dzakanakisa uye mahombe anozvirumbidza mabheji akanaka uye maonero ezvitsuwa izvo zvisingatauri, Kune dzimwe nzvimbo dzinoshamisa dzetsika dzekugara nechisarudzo chediki, mhuri inosara Bed & Breakfasts, mahostela se pamwe nehotera dzine chimwe chirongwa pamusoro pavo. Iwe unofarirwa kugamuchirwa kwakanaka chero kupi zvako waunogara muScotland uye iwe uchaonawo kuti nzvimbo dzakawanda dzinopa kuchengetedzwa kwakachengeteka kwebhasikoro rako.
Nyora kukosha kwokutanga!
Munyori zita *
Mwandu email *
Zvimwe zvekugovana? (Zvichida)
Wedzera mufananidzo kana faira
Iwe hausi robote
MaScottish Highlands 7 Day Weather Forecast
Highlands Vashanyi Vanotungamira
Sarudza nzvimbo AberdeenshireAngusArgyllBanffshireCaithnessInvernessKincardineshireMorayNairnshireOrkneyOuter HebridesPerthshireRoss & CromartyShetlandSutherland
nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva nguva
The National Museum of Scotland (Edinburgh) Mutungamiri
Wick Heritage Center Tourist Guide
Nhungamiro yekufamba muScottish Highlands
Glencoe Skiing pokugara
Ratidza # 5 10 15 20 25 30 50 100 zvose